Banyere Anyị - Beijing Hengqianxiang International Trade Co., Ltd.
Beijing Hengqianxiang International Trade Co., Ltd. nke achọtara na Sept 2012, bụ nchịkọta nke imepụta, imepụta na azụmaahịa maka ijikọ nnukwu ụlọ ọrụ ọkachamara. Anyị factory nwere a tozuru okè mmepụta usoro na management usoro. Anyị nwekwara ọtụtụ ụlọ ọrụ na-arụkọ ọrụ ọnụ ogologo oge, ha dị mma maka ịlele ma na-ebute ngwongwo. Companylọ ọrụ anyị nwere ahụmịhe afọ iri abụọ maka imewe, imepụta na ire ahịa yana ngwa ngwa, ọmarịcha teknụzụ na ụdị mbụ. Anyị nwere ọtụtụ nọọrọ onwe ha tozuru okè ika, "ZHANSHI", "East mara mma", "na-eduzi nnụnụ" wdg, ngwaahịa ahịa nke ọma ná mba ọzọ.
Anyị ụlọ ọrụ ika uwe dabeere padded jaket, ala jaket, jaket jaket, woolen kootu, Pu jaket na windbreaker wdg ndị ikom na ndị inyom uwe. N'iburu ụzọ dị mma na ụdị ejiji, ngwaahịa anyị na-ewu ewu na ịchụso ejiji na ịdị mma nke ndị otu na-azụ ahịa kwesịrị ntụkwasị obi, ọrịre nke ọma na North America, Europe na South Africa.
Companylọ ọrụ anyị na-azụ ahịa mgbe niile, ngwaahịa ọhụrụ, ngwa nke teknụzụ ọhụụ, gbanye ihe ndị ọhụrụ na-emepụta ejiji na mba ụwa, ịghọta mmepe nke uwe mba ụwa, iji wuo "International uwe ụlọ ọrụ mbụ na klas ika"ọzọ. Anyị bulite"nkasi obi","arụmọrụ dị elu","ihe ohuru"na imewe; rube isi"àgwà mbụ", "ahịa mbụ"dị ka isi na uka mmepụta; anyị ga-ere na"ezi obi","ji ọrụ","merie-merie". Mgbe ọtụtụ afọ nke na-aga n'ihu mmepe, ụlọ ọrụ nwere a ufọk ufene ahịa ugbu a na-atụ anya guzosie ike azụmahịa mmekọrịta na ogologo oge imekọ ihe ọnụ na gị kpọrọ ụlọ ọrụ. Anyị kwenyere na site na anyị na nkwonkwo mgbalị, anyị ga-ike ọnụ uru na ndị mara mma ga-eme n'ọdịnihu.